Ivotoerana farany ambony 1500mm Inôksa
Famaranana aorian'ny Satin na fitaratra
Kilasy ara-materialy GRADE 304 (fampiasana anatiny)
GRADE316 (fampiasana ivelany) Safidy fitaratra Mazava, mangatsiaka na miloko
Post Diatmeters 42.4 / 50mm x 160/180 / 200mm Takelaka fototra
Available fanariana vita
Haavo haavo 1100mm (mankany an-tampon'ny lalamby)
1100mm (ambony tampon'ny paositra
tsy misy lalamby ambony) mifanaraka
Fanamboarana Hazo, vy, biriky ary beton
Paositra sy vera
fandrefesana NATAON'NY FAHAIZANA
(miovaova ny vidiny) Fananganana paositra Takelaka fototra mifono vy, paositra fanariana
Hatevin'ny fitaratra 12mm voafatotra,
11.5mm / 17.5 Voalamina Fananganana paositra
(tsy MISY RAILY TOP) Takelaka fototra mifono vy, fonony
Ny vidin'ny rafitr'akanjonao dia ho faritana amin'ny haben'ny savily ilainao, ary koa amin'ny safidy farany nofidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, dia mamokatra any amin'ny zavamaniry any Foshan, Sina ny rafi-pitaterana spigot anao. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny vera dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Teo aloha: Rindrina vy tsy mihetsika vita amin'ny rindrina vita amin'ny vy vita amin'ny vy
Manaraka: Volon-jiro vy avo indrindra amin'ny toeran'ny Glass
Harga Railing Stainless Steel isaky ny metatra
Stainless vy mitsivalana lalamby
Stainless Steel tohatra tohatra vy